I-Raw Sunifiram powder (314728-85-3) Abavelisi - Phcoker Chemical
I-Sunifiram (DM-235) ipowder luhlobo lweeotropiki. Kuyinto eyingqungquthela yokuvelisa i-piracetam kunye nenkumbulo, ukufunda, ukuphucula imizwa .......
Amandla: 1285kg / inyanga
SKU: 314728-85-3 Udidi: Smart Drug
I-Raw Sunifiram powder (314728-85-3) ividiyo
I-Raw Sunifiram powder, eyaziwa nangokuthi yi-DM-235, yintuthuko entsha enomdla kwiinkqubo zokuncedisa ukuqonda. Yakha ngokufana ne-racetam nootropics kodwa malunga nexesha le-1,000 elinamandla kune-piracetam.
I-Raw Sunifiram powder yaziwa ngokusebenza ngokuvuselela umsebenzi we-glutamate receptors kunye nokwandisa imveliso nokukhululwa kwe-"neurotransmitter" yokufunda i-acetylcholine. Kukholelwa ukuba isenzo sikaRaw Sunifiram esisisiseko se-ampakine, oko kuthetha ukuba emva kokuwela I-blood-brain-barrier it binds to AMP-uhlobo lwe-glutamate receptors engqondweni. Oku kukhuthaza ukuveliswa kwe-glutamate, i-neurotransmitter ebalulekileyo edlala indima ebalulekileyo ekusebenziseni i-neural.
I-Glutamate yi-neurotransmitter exitatory ebaluleke kakhulu kwi-plastiki ye-synaptic, okanye ikhono le-nerve synapses ukuphendula ukunyuka okanye ukuncipha kumsebenzi. I-Raw Sunifiram ipowder ikwacatshiswa ukuba ibenze njenge-cholinergic, ikhulise umveliso kunye nokukhululwa kwe-neurotransmitter acetylcholine.
I-Raw Sunifiram powder (314728-85-3) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Sunifiram powder
Igama leKhemikhali DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) propan-1-enye, iPiperazine
uhlobo Numama I-Raw Sunifiram powder, iDM-235
I molecular Fi-ormula C14H18N2O2
I molecular WSibhozo 246.304 g / mol
IMasaisotopic Mass 246.31
Ukuxuba Point 98-100 ° C
I-Biological Half-Life iiyure 4.5-6.5
Sukufaneleka I-Airtight, eyomile neyomoya
Aukuguquka Ukuphucula iMemori, Ukuphucula ukufunda nokunciphisa Ubunzima bobuhlungu, njl njl.
ekrwada Sunifiram powder (314728-85-3) Inkcazelo
I-Sunifiram (i-DM-235) yipiperazine efunyenwe nezidakamizwa ezifana ne-ampakine, ifana ne-racetam nootropics kodwa ngamaxesha angama-1,000 anamandla kune-piracetam. Uphando oluncinci lukhoyo ngoku, kodwa izifundo zezilwanyana zokuqala zibonisa ukuba ingaba yi-nootropic esebenzayo kunye nokunyangwa kwintsholongwane yezifo ze-neurological kuquka nesifo se-Alzheimer, isifo sika-Parkinson, nesifo se-amnesia.
I-Sunifiram yaqala ukuhlanganiswa kwi-2000 yizenzululwazi kwiYunivesithi yaseFirencenze e-Itali. Uphando lubonisa ukuba i-powder sunifiram ingakhuthaza amandla ochopho, isimo sengqondo, kunye namandla nangona kuthathwa ngamanani aphantsi kakhulu.
Sunifiram powder (314728-85-3) Indlela yokuSebenza
Indlela yokwenza i-sunifiram engaziwa, kodwa iyaziwa ngokukhuthaza umsebenzi we-glutamate receptors kunye nokwandisa imveliso nokukhululwa kwe-"neurotransmitter" ye-acetylcholine.
I-sunifiram ivuselela i-glutamate receptor, i-NMDA. Ukwandisa izinga apho i-glutamate (i-neurotransmitter) ihanjiswa phakathi kweeseli zesisindo zeengqondo. Oku kunokukunceda ukubuyisela umemori kwintliziyo ewonakalisiweyo okanye ebuchotsheni.
I-powder Sunifiram yandisa ukwenziwa kunye nokukhululwa kwe-neurotransmitter acetylcholine. I-Acetylcholine inxulumene ngokusondeleyo kunye neenkalo ezininzi zokuqonda, kuquka imemori, isivinini sokufunda kunye nokukwazi, kunye neengqondo ezicwangcisayo okanye amandla okulungisa iingxaki ezahlukeneyo ngaphandle kokuthembela ekuziphatheni okuzifunayo.
Ukuphucula ukufunda kunye neMemori
Kwangathi uMeyi uphucula ukugxila, ukukhuthazwa, kunye nengqiqo yengqondo
UkuPhucula nokuThuthukiswa kwePhulo
kucetyiswa Sunifiram powder (314728-85-3) Isistim
Ngokusekelwe kwimibiko yabasebenzisi kunye nolwazi olufunyenwe kwizifundo zezilwanyana, umlinganiselo we-5-10 mg owathatha ubuninzi bamaxesha amathathu ngosuku ujongwa ngokubini ngokukhuselekileyo nangempumelelo.
Imiphumela of Sunifiram powder (314728-85-3)
Ukususela ngoku, akubonakali ukuba nemiphumo emibi ye-sunifiram powder ukusuka kwiphando okanye kwenzululwazi.
Iziphumo ezibikwe ngumsebenzisi zincinci kwaye zisesigxina kwaye zibandakanya ukwanda kweqondo lokushisa komzimba, ukunyuka kwengqondo kunye nokwehliswa, intloko yesifo, ubunzima bomzimba, ukwanda komzwelo ekuboniseni ukuvakala kunye nokulahla, kunye nokulala. Kodwa kubalulekile ukukhumbuza ukuba akukho zifundo zabantu okanye izilingo zeklinikhi ezenziwe.